Indonesia in Focus: Science, camal iyo cibaadada.
Science, camal iyo cibaadada.
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (353)
(Qaybta saddex boqol iyo saddex iyo konton), Depok, West Java, Indonnesia, August 21, 2015, 19:00 pm).
Aayadaha First oo waxaa ku dhawaaqay Ilaah Nabiga waa Iqro xukun ah: Akhri. Nabiga muujinta Ilaah ee buuxda iyada oo Gabriel Angel ka hor sheegay waxbarasho ama akhriyaan ka hor (Iqro), ama amray in la xasuusto (korka) siiyo Nabiga ahaa kuwa aan waxba aqoonin ah.
Sidaas Quraanka oo dhan xafiday iyo xusuustay Rasululah, markaas oo isaga saaxiibbadiis ah, kuwaas oo markaas u qoray maqaarka, caleemaha iyo waxyaabaha kale oo u oggolaan, ka hor markaas midoobeen oo ah qaab Quraanka sida ugu badan ee 30 Juz lasoo ururiyay inti lagu khaliifo ee Cusmaan, oo loo yaqaan mushab Usman.
Waxaa ka mid ah waxyaabaha uu ka kooban yahay Quraanka ka sokow ka kooban yahay xoogga Ilaah, sidoo kale waxa ku jira oo dhan waxa ku jira dhulka iyo cirka ah in loo abuuray Ilaah oo ah qaab samada, dhulka, iyo badda, biyaha, kalluunka iyo deggan oo dhan.
Oo dadkii oo dhammu Content samada, qorraxda, dayaxa, xiddigaha iyo caalamka oo dhan waa la maamulaa Ilaah waa kan noogin. Dhammaan ifafaale Dabiiciga ah ayaa la abuuray Ilaah, sidaas daraaddeed ninkii u malayn karaa aqoontiisa iyo aqoonta ay u leeyihiin in la qanciyay karo midnimada Ilaah. Iyo sayniska ee aadanaha ayaa sidoo kale ka baran karaa amarrada iyo digniin iyo reebay Eebe ee Al Qur.an iyo Sunnah (Al-xikma / Xadiiska).
Iyadoo sayniska waxaynu go'aamin karnaa in amarka ku haboon ama cibaadada halkaas oo dhibaatooyinka dunida Waxaa reebban in la sameeyo.
Nabiga yiri, dhibaatada asal ahaan sharci darrada ah cibaadada sameeyo haddii uu jiro amarka ah in Quraanka iyo Xadiiska.
Iyo dhibaatooyinka adduunka ee markii hore la ogolaan karo (May) haddii Waxaa ka Reebban Magaalo ku Quraanka iyo axaadiista ah, sida cunista hilibka doofaarka, dhiig oo baqtigoodana waa (marka laga reebo kalluunka iyo ayax), iyo mamnuucidda tubaakada (sigaarka) Muhammadiyah Indonesia iyo culimada of Saudi Arabia soo saaray a fatwa sigaarka sharci darrada ah.
Suat Fathir Aayaadka 9-14:
Tarjamada warqad Fathir Aayadda 9-14
9.  Oo waa Ilaah kan u Dira Dabaysha; iyo (dabayl) daruuro dhaqaaqin, ka dibna waxaan tilmaan daruur dal dhintay (madhalays)  iyo roob ah in aan dhulka noqon dhimasho (qalalan) ka dib markii . Kaasi waa sarakicidda .
10. Ruuxii dooni sharaf, ka dibna (ogaada) ammaanta in wax walba oo iska leh Ilaah . si ay isaga sara kici doonaa  erayo wanaagsan , iyo camal wanaagsan  ayuu kor ugu qaadi doonaa . Sida dadka loo qorsheeyey dambiga  ay heli doonaan ciqaab aad u adag , iyo qorshayaashooda xun ku khasaaray halkaas .
11. Eebe waa kan idinka Abuuray Dhoobo  ka dibna mid ah manida , ka dibna uu laba nooc (lab iyo dhaddig) aad  sameeyey. Naag No abid uuraystaan iyo dhalaan, mana dhalo ogaanshaha Eebe. Oo ha dheerayn nolosha qofka, mana hoos ay da ', laakiin (hore u dhismay) Kitaabka (Lawh Mahfuz) . Indeed, taasina waa u fududahay Eebe .
12.  oo aan ahayn mid ah (inta u dhaxaysa) Labada Badood, taas oo cusub, cusub, wax cabbo kaheli kale ee cusbada leh oo qadhaadh. Oo waxaa ka (kasta badda) in aad wax uga cuntaan Hilib cusub kalana , oo aad ka saari kara dahabka ah in aad xirto , oo halkaas waxaad arki socda oo ku kala qaybsan tahay maraakiibta badda dhexdeeda inaad doonataan Fadligiisa [21 ] iyo inaad ku mahadisaan.
13.  habeenka ayuu u geliyey maalin oo ay ku daraan maalin cad habeenkii oo sakhiray Qorraxda iyo Dayaxa, mid kasta oo ku wareegaya in markii ugu qoray .  Maxaa (sameeyo) si Eebe Eebihiin, uu boqortooyooyinka kale oo dhan waa. Oo kuwa aad u yeedhanaysaan korkiisa (cibaadada) Eebe  ka soo hadhay ma jiraan wax inkastoo epidermis sidii caleemo khafiif .
14. Haddii aad ku, ma maqli codsigaaga , iyo haddii oo kaliya, waxay maqli, waxay sidoo kale ma ogolaan codsi ka yimid  aadan. Maalinta Qiyaamana waxay kemusyirikanmu  diidi doonaa, midna ma ku siin karaan macluumaadka  sida siiyey (Eebe) Yaa Mahateliti .
MARKA SAYNISKA samafal LA'AAN
Sida Muslim ah dabcan mar kasta oo la dhiso shanta salaadood maalin walba, salaadda ama kuwo kale. Waxa uu mar walba weydiineysaa muujiyey mustaqim shirathul. Taasi waa wadada toosan dheer oo uu soo maray dadka la siiyey Nicmo, wuxuuna dhawray wixii jidka ka mid ah dadka maghdhubi `nabad noqon (dadka aad Ilaahiinna ah uga xanaajiseen), sidoo kale dadka jidka dhallin (kuwa Dhuma). In faallo, labada kooxood ku xusan , in dadka nabad mahgdhubi ahaan waa Yuhuudda, halka dhallin waa Nashara.
Ibn Kathir rahimahullah yiri, "Oo waxaa faraqa u dhexeeya labada waddooyinkiisa-in si iska ilaalin jiray labada-dhinac, sababta oo ah habka ugu Mu'miniinta isku daro sayniska iyo hay'ad samafal. Samafal Yuhuudda waa laga badiyay, halka dadka Masiixiyiinta ah ee ku waayi kartaa aqoonta. Sidaa darteed, Yuhuud iyo Nasaara ka kasban kartaa cadhadii baadi faa'iido. Kan og yahay, markaas ma sameeyaan, waxay mudan yihiin cadho. Si ka duwan dadka wax ogayn. Nasaara uu jidkiisa, iyagu ma ay heli, maxaa yeelay, iyagu ma ay tegi sida ay albaabka uu awoodo dadka, marka uu ujeeddo gaar ah, laakiin. Oo kuwaasu in ay raaceen xaqa Eebe. Sidaas, ay ku dhaceen qalad. "
Dad badan ayaa aaminsan in badan oo samafal oo aad ku sujuuddaa ayaa helay damaanad ah ee nolosha, ugu yaraan calaamad run ah oo caddaymo keshalihan. Taasi waa inta jeer ee aan maqlo, iyo in ay arrin dhacda ka mid ah Muslimiinta. Xitaa haddii aan isku dayno in la xasuusto xarfaha in marar badan ayaa maqlay, markaas oo dhan u malayn iyo Malo ahayn sannadihii la soo dhaafay, waxaan bedeli karaa maalinta berri. Lamalaysan, qof qaba tababar ah sida ugu badan ee pepasiran xeebta, laakiin mar miisaamay, uu sida faniinaya, Allah Subhanahu wa imtithaal,
Oo waxaannu soo food dhammaan hay'adaha samafalka in ay sameeyeen, oo Camal ah Waxaana (sida) ciidda duulaya ka dhigi doonaa. [Al-Furqan: 23].
Ma aha oo kaliya camal aan la arkaa in dhaqanka la aqbalay, isaga qudhiisuna waa mid sabab u gelin jiray dab jahannamada galo. Allah Subhanahu wa imtithaal,
Durba aad datangkah news (qiyaastii) Maalinta Qiyaame? Wajiyaal maalintaas noqon doontaa murugaysan tahay, inay ka shaqeeyaan shuqul adag mar kale u daalay, galay dab aad u kulul (Jahannamo). [Al Ghasyiah: 1- 4].
Ibn Abbas ayaa sheegay, "Khusyu`, laakiin aan camal faa'iido," ayaa lagu sharaxay by Ibn Kathir, in uu wax badan oo samafal oo berletih-ka daalin, laakiin waxa uu kasbaday jahannamada dabka ah waa mid aad u kulul . Sidaa awgeed, Imam Bukhaari cutubka samaynta ee uu ku soo arooray Saxiixul ah, Chapter: aqoon u leh hortiisa ka tidhaahdaa, oo wanaag u sameeya ".
Wuxuu kugula sayniska AL Quraanka
Faqradaha sharraxaya oo ku saabsan eegidda sayniska iyo ereyo ka dhan ah dadka shaqada aan sayniska waa mid aad u badan . Allah Subhanahu wa imtithaal in la kala saaro dadka kuwaas oo aqoon u leh nacaska oo kale, sida nin aan arkay indha la '.
Ma jirtaa cid og in waxa laga soo dajiyey xagga Eebahaa, waxaa la mid ah sida qofka indhaha la 'ahaa? [Ar kufrinayaan: 19].
Dhab ahaantii ma aha oo kaliya indhaha la ', laakiin sidoo kale qofkii dhega la' oo carrab la.
Meelo kala duwan ee l Quraanka Eebe cambaareeyey dadka jaahiliinta, kuwaas oo:
Laakiin dadka badankiisu ma oga. [Al-Araf: 187].
Badankoodu aan kuwa buuxa ahayn. [Al Maidah: 103].
Dhab ahaantii waxa ay u dhigantaa xoolo, iyo ka doqonnimo weynahay xoolaha:
Illeen bahalkii (noole) kuwaas oo ugu xumaa ee Eebe Agtiisa waa kuwa waa DhagaLa'yihiin oo maqalku ku adag yahay aadan fahmin wax. [Al-Anfal: 22].
Allah Subhanahu wa imtithaal sheegayaa, in dadka doqon xun yahay xayawaanka ee nooc kasta iyo nooc kasta. Laga bilaabo dameer, eyga, cayayaanka, oo ay ka xun yahay xayawaanka-xiddigii yihiin. Wax walba waa ka khatar Iimaanka rasuullada oo ka mid ah, xitaa inay yihiin cadaawayaasha diinta run.
Waxaa intaa dheer, sharci ogolaanaya in wax ahaa asal ahaan aan sharci ahayn, maxaa yeelay, aqoon u leh iyo mid kale ma aha aqoon u leh. Oo kuwaasu dihalalkannya cunaysa eeyaha ugaadhsiga hilibka geedka baray, in la barbardhigo eeyaha caadiga qabsan doonaan waxay ugaadhsanayaan.
Waxay ku weydiin, "Ma xalaal baa iyaga?" Waxaad dhahdaa, "banneeyey inaad u wanaagsan oo (sida booli oo qabsaday) by xayawaanka duurjoogta ah oo aad idinku baray in ay tababaraan si ay u ugaadhsadaan, aad wax ku barayay sida ay waxa Eebe idiin baray. Sidaas, ka cuna waxay idiin qabtaan ku, oy xusaan Magaca Eebe Xayawaanka (fasax). kana Dhawrsada Eebe, Eebana way deg degtaa xisaabtiisu. " [Al Maidah: 4] 
Halka Sunnah iyo Salafkii atsar aad u badan taas oo dhan sharxayaa arrintan.
Waxyaalahaas oo dhan dabadood, markii a Muslim xajka-amarkiisa Ha Laabeen Indhahooda in dad sodcaal ah, kuwaas oo naftooda u yeelaan Islam, waxa la ogaaday in ay shaqada waxa jira shaci iyo isla'egta ah. Ie Wax dan ah kama sayniska ee Shareecada iyo dhex tiimbadeen dhoobada jaahiliinta. Tani waxay keeni kartaa in mararka badan oo xadgudub ah in fahanka Islaamka.
Tani waa iyaga ka hor, koox la yiraahdo Kharijites, ilaa xad in uu Nebigu sheegay, in dhaqanka ee saaxiibbadiis marka la camalkooda waxba ma marka la barbar dhigo. Salaaddooda, marka la barbar dhigo annagoo baryadayada ma aha waxba. Waa dad khubaro caabudina. Maalin ka dib wuxuu u diriray sida libaax oo kale, oo markay makhribkii ahayd sida wadaad ah ... Si kastaba ha ahaatee, waxa ay dhamaadka sheekada? Nabiga ayaa noo sheegay in Islam ayaa ku koobnayn hunguriga waxay ... Waxay ka soo baxay diinta Islaamka, sida dheecaan ka mid ah fallaadho ka soo qoday; oo waxay ku yidhaahdeen eeyaha cadaabta. Qof kasta oo u suurtagashay in ay dili doonaan, waxaa lagu Abaal marin Eebe Subhanahu wa imtithaal. Xitaa Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii ayaa berazam, markii uu la kulmay ay da'da, ka dibna uu u dagaalami doono ka soo hor jeedda, oo dagaal sida ku yidhi Ad ...
Waqtigan xaadirka ah, sii kordhaya shirka. Oo kuwaasu shirka aasaasay bid`ah iyo Sixir, iyo kuwa sanamyada. Aasaasay la aaminsan As`ariyyah Maturidiyyah. Balanqaadka daacad u taabacsan leh afar Sufism tharikat: Jistiyyah, Qadiriyyah, Sahruwardiyyah iyo tariqat Naqsyabandiyyah.
Inkastoo dhibaatada aqidah iyo tawhid. Badan oo ku saabsan tawhid Waxay fahmi weydo marka lagu la barbar dhigo kuwa ree waqtiga Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii. Iyagu waxay keliyahoo ku galin tawxiid tawxiid Rububiyyah la fasiraadda caqiidada ah. Oo ha ogaato oo ku saabsan waxa loola jeedo ifayo Uluhiyyah. Sida tawhid Asma` ku wa Shifat, ay ka mid aqidah'Ashariyya iyo Maturidiyyah yihiin. Sida aan ognahay, in labada dugsiyada kuwaas oo gaar ahaan kuwa ku tawhid ah, ayaa ka iilata dugsiga tukan Sunnah wal jamaacadda.
The cibaadada iyo mysticism iyaga ku saabsan; ka dibna ay dibaiat la tariqat iyo dhaqanka dhikr afar-dhikr iyo barakadiisa bid`ah buuxsantay oo quraafaad. Sida akhrin (la ilaha) afar boqol jeer, iyo (Ilaah, Eebe) lix boqol jeer maalin kasta. Buugaagta Shalawat waxaa inta badan akhriyo by, waa buug caanka ah oo barakeysan bid`ah iyo ghuluw u hibayso. Taasi waa kitaabka Dala-ilul Khairat, Burdah.
Buugga waxaa ugu macno iyaga, waxa loogu yeero Tablighi Nishab in. Qoray mid ka mid ah aasaasayaasha ay. Buuggan waxaa ku dhawaad laga leeyahay oo akhriyaan shirka kasta, aad iyo aad bay u akhri arooray Saxiixul Bukhaari. Buuggan waxaa ka buuxsamay Sixir, shirk, bid`ah, iyo xadiis xadiis-xadiiska been ah oo daciif ah. Sidaas waa kitaabka nolosha Ash Shahabah, oo iyaga dinamalkan, ka buuxsamay Sixir iyo sheekooyin ay run ahayn, iyo wixii la mid ah ...
Gabagabadii ku saabsan shirkan waa in ay yihiin shirka in uusan dan sayniska iyo wadaado ah, ku wacdiyaya on top jaahiliinta , oo leh caddaymo Xadiiska taas oo ay had iyo jeer dendangkan ie, "ii sheeg xataa mid aayadda". Tani xadiiska inkastoo dhab ah, laakiin aan dhab ah waa habka ugu waxgarashada Xadiiska tani ay. Qof kasta ee gelaya shirkan galay horeba waa istaahilaa isagoo turjubaan ku wacdiyi jiray guri ilaa guri ku casumay shirka in ay yihiin sababta xadiiska kor ku xusan. Mise waxay ka akhriso fadhilah Kitaabkiisa masaajidka a ... oo ay permisalkan in Muslimiinta hadda sida (dadka qaraqmeen in la badbaadiyey). Ha mana garan waxbarasho oo aan dabaalan karaan in maalin ama laba, si uu badbaadin karo in ka hor inta u degi lahayd, ama xitaa ugu horayntii rabay in ay caawiyaan, maxaa yeelay, ma ay dabaalan karaa ay yihiin labada maanshaynay badda dembiga iyo qalad.
Ma aha markii ugu Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii, markii mid ka mid ah saaxiib ku dhaawacmeen, ka dibna junub xilliga jiilaalka, oo wuxuu weyddiistay mid ka mid ah. Ma jiraa ma rukhsah inay ku maydhato? No: waxa la weydiiyey in uu ka jawaabo! Sidaas, qaadan ah asaxaabta qubeyska ayaa sababay uu u dhintay. Nabiga sallallaahu Marka 'Laahu calayhi wa calaa aalihii maqlay sheekadan, ayuu sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii aad buu u xanaaqay, oo wuxuu ku yidhi, "Runtii, waxaad u leeyihiin in ay u dilaan isaga. Waxaa laga yaabaa in aad waxaa lagu Abaal marin Eebe Subhanahu wa imtithaal. Oo maxaad wax u weydiiso haddii aadan aqoon aad? Sababtoo ah ee daroogada la ma oga inaad weydiiso. "
Waa maxay u xiiso badan in la baaro shirkan waa, sababta oo ah waxay jamaacadda jirjirroolaha. Beddelmay kaluun kasta, iyo isweydaarsiga midabka sida uu sheegay deegaanka. Haddii aanay haysan aragtida xoog iyo qasab kuma aha aasaas adag? Mise waa ay shaqada sida hab, oo ururisa dhammaan midabada iyo kooxaha hoos timaada oo ka mid ah kooxda?
Sidaa darteed, shirkan ugu jira akhristaha, in la barbardhigo kuwa meel qoraaga. Waxa laga yaabaa, in hal meel ay cashar ah oo aan sababta oo ah cilmiga, laakiin sababtoo ah jawi ah in isaga lagu qasbay in ay halkaa ka bilowdo. Oo waxaa laga yaabaa in halkii, noqon calanka kii bid`ah iyo sidoo kale penyebarnya.
Jamaacadda waxaa inta badan si fudud u saamayn jawiga, sababta oo ah dhibaatada ku jiray. Taasi waa, aan aqoon sayniska in uu yahay dhab ah. Markaas, waxaad ku arkeysaa sida rafaasad ah meesha ugu sareysa ee buurta lahaa. Bak baal ah oo lamadegaanka ku yaal, Ee raac waxa la damci karo oo dabayshu kaxayso.
Xitaa haddii aan la xidhxidhay oo la kulan ee masaajidda iyo kulan ee waddamada ay jeclaayeen-xitaa dalka halkaas oo buulkeedii ugu badan yahay ee ku-Sanamyada adduunka, markaas waan hubaa ahay, way dhici doonaan marka laga reebo. Markaasaa shirkii oo ay saamayn doono shirka kale, ama uu ku soo laabto gurigooda.
Waxaa laga yaabaa in su'aalo uuraysatay. Kanu miyaanu ahayn guusha ay saaray dadka oo dembilayaasha ka meelo, Toobad keena oo waa inaad u samaysaa sida mid ka mid ah wanaag iyo guul ah shirkan ee ku wacdiyaya?!
Sidaas darteed, waxaan ka fiirsan jawaabaha Aman Ali Shaikh Al Jami rahimahullah, markuu ku yidhi saabsan dacaayad dacaayad ugu casrisan taas oo uu leeyahay isaga mid la dhibaatooyinka kor ku xusan:
... True, waxa uu dadka u sii daayo meelaha discotheques iyo shineemooyinka. Waa wax ay diidi. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu iyagii ku amarkayga ku soo jiidayaa ka dib, waxa ay qabato? Haddaba waa maxay wacdiyo iyaga la dacaayad, iyo habka ay u anbia` ah (Nabiga)? Ama halkii, iyaga bari iyo ururiyaan iyaga, sidaa daraaddeed waxaa lagu kala qeybsamay noocyo kala duwan oo tariqat Sufism? True ... Si kastaba ha ahaatee, waxa uu sii daayay ka Jaahil ah in Jaahil ah. "
Ma uu iyaga ku biiro faham saxda ah ee Islaamka. Caddeynta, isaga qudhiisuse wuxuu ku dhaqmayso mid tariqat shufi. Oo weliba dadkii ka ah in lagu soo saaray ka discotheques meelaha, haddii aysan tariqat qaatay isaga by, qaadashada madlaca kale tariqat. Iyo in uu fariin waxaa sidoo kale ciribtirka cibaadada in Eebe ka soo Subhanahu wa imtithaal, taas oo si cad u arki karo in dalka? Haddii uu soo saaray nin reer Baytja agagaarka Qubuuraha, sida qabriga Xuseen, maleshiyada iyo Abdullah?! Haddii uu soo saaray ninka sharcilaawayaasha, sharciga sharcilaawayaasha, dimuqraaddiyadda si sharciga Ilaah? Tani waxay ahayd in la sameeyo. Haddii tani ay tahay inuu fariin, taas oo xambaarsan dacaayad ah oo ay daruuri tahay dacaayad run. Laakiin sida aayadda wuxuu leeyahay,
Haddii haddii ay martida u gabyeen iyagoo sita daf
Dabcan dhammaan in guriga ay qoob ka jecel
Haddii aanay isaga iyo aqoonta makrifah ku saabsan diinta Islaamka waa run, sida uu noqon karaa waxa Qubuuraha ku tagay iyo dagaal ka dhan ah kuwa ku Rukuucsan ee isaga ka ag dhow. Maxaa la samayn karaa si dadka ku dhicin sinaysta kuwanu? 
Ugu dambeyntii. Bal aan aqoon dhallinyarada ahow,. Oo xaqiiqa isagu wuu albaabka ammaanta, iyo badbaadada.
[Guuriyeen ka edition magazine ee As-Sunnah 01 / Year VII / 1420H / 1999M Published Lajnah Foundation Istiqomah Surakarta, JL ah. Solo - Purwodadi Km. 8 Selokaton Gondangrejo Solo 57 183 Tel. 08121533647, 08157579296]
Posted by needsjobslowongankerja at 4:13 PM